वशिकरण भनेको के हो? के यो सुरक्षित छ? म कसरी वशिकरण गर्न सक्छु? के मैले वशिकरण विशेषज्ञ, तान्त्रिक वा ज्योतिषीको मद्दत लिनुपर्छ?
वशिकरण भनेको के हो? वाशिकरण भनेको निष्पक्ष मनसायले कसैलाई वशमा पार्ने विशुद्ध तान्त्रिक विधि हो। यहाँ "निष्पक्ष इरादा" शब्द थिच्नु आवश्यक छ किनभने वशीकरण एउटा यस्तो शक्ति हो जुन आध्यात्मिक शक्तिहरूलाई आह्वान गरेर कमाइन्छ र आत्मिक शक्तिहरूले मात्र तपाईंलाई आशीर्वाद दिन्छ यदि तपाईंको इरादा निष्पक्ष छ र कसैलाई हानि नगर्ने। वाशिकरणमा सामान्यतया नाम, तस्बिर र प्रक्रिया प्रदर्शन गर्दा प्रयोग गरिने केही अन्य विवरणहरूको प्रयोग समावेश हुन्छ। जे होस्, त्यहाँ विभिन्न तान्त्रिक विधिहरू छन् जसमा कालो जादूको प्रयोग समावेश छ र दुष्ट उद्देश्यका साथ पनि गरिन्छ तर गुरु लटाधारी मणि ईश्वर जीले तपाईंलाई सधैं निष्पक्ष इरादाका साथ मात्र वैदिक वशिकरणको मद्दत लिन सुझाव दिनुहुन्छ
वशिकरणमा तन्त्र, मन्त्र र यंत्रको प्रयोग समावेश छ। यो क्रिया आफैंले गर्न सकिन्छ वा थप प्रभावकारी र स्थिर नतिजाहरू प्राप्त गर्नका लागि तान्त्रिकद्वारा गर्न सकिन्छ। कतिपयले तर्क गर्छन् कि मन्त्र जप गरेर र आध्यात्मिक प्रक्रिया गरेर तान्त्रिक वा व्यक्तिले कसरी कसैलाई वशमा राख्न सक्छ? यस प्रश्नको उत्तर एकदमै सरल छ, त्यो दूरी र उमेर आध्यात्मिक शक्तिहरूको लागि बन्देज होइन। कुनै पनि तान्त्रिक वा व्यक्ति जब कुनै पनि आध्यात्मिक प्रक्रिया जस्तै वाशिकरण गर्दछ तब तपाईं र आध्यात्मिक शक्तिहरू बीचको स्रोत बन्छ।
वशिकरण मन्त्र, क्रिया, टोटके र स्पेल कास्टको प्रयोग केवल प्रेम वा विवाहको मामिलामा मात्र सीमित छैन तर यो मालिक-कर्मचारी सम्बन्ध, विक्रेता-ग्राहक सम्बन्ध आदि जस्ता व्यावसायिक सम्बन्धहरू सुधार गर्न र प्रारम्भ गर्न पनि अत्यधिक प्रभावकारी छ।
के वशिकरण सुरक्षित छ? के यो कालो जादू हो? होइन, वशिकरण कालो जादू होइन तर केही तान्त्रिकहरूले छिटो परिणाम देखाउनका लागि कालो जादूको प्रयोगलाई वशिकरणसँग जोड्छन्। यद्यपि, वाशिकरण एक्लै कालो जादू होइन, वास्तवमा यो पूर्णतया आध्यात्मिक प्रक्रिया हो वा सेतो जादू भन्नुहोस्। जहाँसम्म वशिकरण क्रिया प्रयोग गर्ने सुरक्षाको सवाल छ, वशीकरण पूर्णतया सुरक्षित छ र कसैलाई पनि फरक पर्दैन। वाशिकरणको बारेमा सबैभन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यसमा कुनै पनि चरा वा जनावरको बाली (बलि) को प्रयोग समावेश छैन
गुरु लटाधारी मणि "ईश्वर"तपाईको समस्या अनुसार कुनै पनि वशिकरण विधि गर्न विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि 9857043875 मा कल गर्नुहोस् ।